About Us-Hakunyanyi HOTEL tepi mugadziri
Armati-- China tepi Manufacturer nokuda Luxury Hotel Project.
Armati bhati Hardware, vaitungamirira mugadziri mukuru-mugiredhi utsanana muchiso mu Asia-Pacific Region. Tine yokugezera tepi Hardware kugadzirwa chirimwa muna Southern China Jiangmen guta (Heshan) .We wo acquird munhu German mukugadzira vakaroorana. mangwanani kubva 1966 isu zvinosanganisira kupinda yokugezera magadzirirwo indasitiri, kutangira pakati 1990s, tatanga tepi uye kugeza wakakodzera kugadzirwa maindasitiri, azvaitwa muna Foshan uye Heshan City.Our chigadzirwa Categories zvinosanganisira umbozha mukuru magumo tepi, Hotel yokugezera Hardware nenhumbi, hotera Mvura hurongwa, chimbuzi Flushing vharafu, zvoga Switch tepi, uye wakakwana zvikuru customized chakagadzirwa nematombo yokugezera maturo uye bathtube.
Amati yokugezera vatova OEM mukugadzira naye vakawanda chiGerman uye chiItalian yaizivikanwa muchiso, kusanganisira akakurumbira chaizvo Dornbracht, Grohe, Hansgrohe, KWC, Gessi, Zucchetti zvichingodaro, dzimwe nguva isu zvibereko muenzaniso wakakwana, dzimwe nguva isu kupa zvikamu uye components.With yepamusoro zvinhu uye mukuru kuenzanisa resonable mutengo, hatina zvinobudirira kukwezvwa zvikuru-nyeredzi shanu Hotel Management Group muna Asia-Pacific Region uye vave yedu kwenguva refu naye, akadai Kempinski, Sheraton, The Venetian uye zvakawanda. (Check zvinotevera nokuti Armati hotera purojekiti nyaya yokudzidza)
In Chinese epamba kumusika, isuwo kufunga muumbozha Hotel chirongwa market.All yedu wepurovhinzi Distributor uyewo pamutemo Distributor pamusoro GROHE/ HANSGROHE/ DORNBRACHT .We Tiri nokutengesa pakukura superstore munyika yakaita Walmart,The Home dhepoti, Nirvana vake, tinoda kuti awanewo dzemunyika musika mugove nokuda muumbozha Hotel musika chidimbu. (Check zvinotevera nokuti Armati hotera chirongwa nyaya yokudzidza mudzimba uye kunze)
Somunhu Hardware mugadziri vanopfuura 20 makore ruzivo, isu ave akazviunganidzira vakawanda muforoma zvakasiyana tepi nomutobvu shape.Partner pamwe Italian mugadziri tine 38 akatevedzana tepi uye 16 akatevedzana kugeza nenhumbi sezvo kwedu mureza range.But tine 30% epamba bhizimisi setsika zvibereko, uye> 50% dzakawanda bhizimisi sezvo OEM customized kugadzirwa. (Check zvinotevera nokuti Armati tepi yokugezera zvishongedzo chigadzirwa katarogu)
Isu zvamaronga kuti pave nemamwe tepi nokuti mumwe neemhizha ane hope uye zvinangwa! Tikaenda pasi MOQ nokuda OEM firimu, tinogona kunyange kubereka customized tepi wako riende zvikuru. inimagine kuti mugadziri pamwe chete unhu mureza kuna HANSGROHE, GROHE anogona kuita tepi accroding kuti pfungwa dzako, yokunyora nokudhirowa, kana mapikicha, uye kutungamirira nguva mazuva 10 chete kuti 4 mavhiki. (muenzaniso wedu ichangopfuura kubva magadzirirwo pfungwa kune vakawanda kugadzirwa kumugumo mazuva 45 chete) . Izvi zvichava akasiyana, ichijekesa uye yakanakisisa mutakuri Mugadziri wacho tarenda, inotungamirwa uye vanosundira noruoko rwenyu romubati muchiso. Sezvakangoita akakurumbira chaizvo Starck Philippe. (Check pano nokuti Armati Custom tepi kuti hotera nyaya yokudzidza)
1) ndinoda kuziva nhoroondo Amati, Uri Chinese kambani kana guta anazvo kambani wokumwe, uye chii ukama pakati kambani German?
Tiri chikwata multi-National, redu kugadzirwa nechigadziko equit pamwe Taiwanese kugadzirwa kwounyanzvi uye knowledge.We awana Germany chirimwa pamwe emakore ruzivo utsanana ware.We vakaripira Italian chigadzirwa mugadziri kuumba kwedu model.We zvose Chinese uye German.In ari Chinese epamba kumusika uye musika dzakawanda, tinoshandisa Amati sezvo hachizi nokuda utsanana zvigadzirwa.
2) Ndinoda kuziva zvakawanda zvenyu kugadzirwa chawo, zvakadai nzvimbo, nharaunda, vashandi uye QC, uyewo saizi ako vemabhizimisi, etc?
Tine svikiro kadikidiki kugadzirwa chirimwa pamwe 10000 mativi mita uye 150 worker.We ritaure Wokumusorosoro-mugumo shanu Stars Hotel chirongwa musika, pamwe tsika guru ichi market.Our mutengi anosanganisira Hotel uye Interior neemhizha, Muvaki, yokuvaka (zvikurukuru kugumisa User), Retail nokuparadzirwa hachisi priority.We wedu dzika JIT Kugadzirwa style.In 2015 wedu Chinese musika turnover aneKumbonetswa USD 12 mamiriyoni, nokuti mabhizimisi makasimba yose turnover kuti 35 mamiriyoni USD.
3) Sei gadzirisa tepi? Ndine chete chirongwa chimwe ruoko, ndinogona kukumbira kuti gadzirisa mashoko tepi?
Tine 50% yevanhu ekisipoti zvigadzirwa nokuda nemhosva Customize tepi, tarisa pano zvizere.
4) tepi zvako kumusoro-mugumo, shanu-nyeredzi pahotera giredhi, ndinoda kuziva zvizere, Ungashandisa here?
Tinoshandisa hwakanakisisa endarira kuti tepi uye yakanamirwa pamifananidzo uye pose kurapwa zvigadzirwa chete mitemo German, Tine imupota pachake mugero nokuti unhu chinoumba akafanana Kereox zvedongo katuriji uye NEOPERL aerator. (tarisa pano nokuti Armati tepi chigadzirwa zvizere)
5) Unogona kupa hotera yokugezera Suite, zvinonakisa pasuru?
Zvechokwadi, isu kubereka yokugezera Hardware dzendarira akafanana tepi, yokugezera nenhumbi, Mvura akatevedzana, uye tabhu tsvina, isuwo tine chakagadzirwa nematombo maturo uye tabhu kuti ishamwari. Wnoziva ose hotera yokugezera rakasiyana, kutevera hotera chaizvo zvakatipoteredza, kukura kugadzira mumwe yokugezera fitting.Sometimes, kutenga rinozivikanwa hachizi pamusoro yokugezera wakakodzera, murege yakakodzera yomunharaunda yako utsanana zvivako Specification. Zviri nani kuwana chiitiko, unhu vimbiso customized mugadziri pamwe, kuchengeta unyanzvi zvazviri uye zvoupfumi, Kana munhu wose kungovashandisa huripo muchiso yokutevedzera, hapana kudikanwa akagadzira.
6) kupi zvako kugadzirwa chawo ndechokuti, ndinogona kushanyira chirimwa wako China?
Kugadzira kwedu chawo kumaodzanyemba China Jiangmen guta (Heshan), Guangdong province.We akamisa hofisi Shenzhen nezvezvipfuwo kumusika, tine showroom muguta downtown.Welcome kushanyira kwedu chirimwa kukurukura kwako basa chinodiwa. Dzimwe nguva 1 kana 2 mazuva chiso chokwadi musangano kunogona kugadzirisa zvakawanda dambudziko pane akawanda mwedzi tsambambozha kutaurirana.
(Check pano nokuti Armati kugadzirwa chirimwa uye chigadzirwa zvizere)